ဗန်းမော်ညိုနွဲ့ - ဝီကီပီးဒီးယား
(1922-12-27)ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၁၉၂၂
နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၉(2009-11-12) (အသက် ၈၆)
အမျိုးသားစာပေဆု၊ ပထမ (ကလေးစာပေ) ၁၉၆၃
၈ ဘဝ၏ နောက်ဆုံးအချိန်များ
၁၉၂၇ တွင် ဗန်းမော်မြို့ မြူနီစပယ်ကျောင်း (ယခု ကြေးနန်းရုံးနေရာ) တွင် သတ္တမတန်းအထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ သတ္တမတန်း အောင်မြင်သောအခါ ယခင်အခေါ် အေဘီအမ် ရောဘတ်ကျောင်း (ယခု အလက ၃) တွင် ပညာဆက်လက်သင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ ပေါက်မြိုင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၉ - ၁၉၄၁ တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ကျောက်မြောင်း ဆရာအတတ်သင်သိပ္ပံကျောင်းမှ ဆရာဖြစ်သင်တန်း လက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။
ဆရာဖြစ်သင်တန်းလက်မှတ် ရရှိပြီးနောက် ၁၉၄ဝ တွင် ဇာတိဗန်းမော်မြို့ မြူနီစပယ်ကျောင်းတွင် အလယ်တန်းပြ ကျောင်းဆရာအဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏ တပည့်များအကြားတွင် ဆရာထွေးဟု လူသိများခဲ့၏။
၁၃၀ဝ ပြည့်အရေးတော်ပုံ ကာလမှ စတင်ကာ ကဗျာနှင့် စာပေများ စတင်ရေးသားခဲ့ပြီး အလယ်တန်းပြ ကျောင်းဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်စဉ်ကာလတွင် ဒဂုန်မဂ္ဂဇင်း၌ 'မြို့ဗန်းမော်' ကဗျာဖြင့် စာပေလောကသို့ စတင် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ် တွင် အရုဏ်ဦး ကလေးကဗျာများ စာအုပ်နှင့် စာ‌ပေဗိမာန် အနုပညာ စာပေဆိုင်ရာ ကလေးသူငယ်စာပေ ပထမဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ ထိုကဗျာများကို မူလတန်း၊ အထက်တန်းနှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအတွက် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
စစ်ပြီးခေတ်တွင် ပြည်ညွန့်၊ အရှေ့တိုင်း၊ သစ်ဆန်း၊ ပဒေသာ၊ သွေးသောက်၊ ရှုမဝ၊ မြဝတီနှင့် ငွေတာရီ မဂ္ဂဇင်းများတွင် ကဗျာများ အဆက်မပြတ် ရေးသားခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန် ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ အဆက်မပြတ် ကဗျာများ ရေးသားခဲ့ရာ ကဗျာပုဒ်ရေ ထောင်ကျော် (လက်ရေးမူ မှတ်တမ်းများအရ ၁၁၅၉ ပုဒ်) ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၉၇ ခုနှစ်၌ ကဗျာတစ်ပုဒ်မျှ ရေးသားခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ဝတ္ထုတို ၁၀ ပုဒ်ခန့်နှင့် ဆောင်းပါး ၁၀ ပုဒ်ခန့် ရေးခဲ့သေးသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ကဗျာကိုသာ စဉ်ဆက်မပြတ် ရေးသားခဲ့သည်။
စစ်ကြိုခေတ်၊ စစ်တွင်းကာလ၊ စစ်ပြီးခေတ်၊ ဂျပန်ခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ် စသည့် ခေတ်အဆက်ဆက်မှစတင်ကာ မျက်မှောက်ခေတ် နိုင်ငံရေးအထိ စာပေသင်ကြားသည့် ကျောင်းဆရာ၊ ကလောင်လက်နက်ကိုင်ဆွဲသည့် စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာတယောက်အနေဖြင့် ကွယ်လွန်ချိန်အထိ တက်တက် ကြွကြွဆောင်ရွက်ခဲ့သူ တဦးဖြစ်သည်။
ဆယ်တန်းရောက်သောအခါ ၁၃၀၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ဖြစ်သောအခါ မိသားစုနှင့်အတူ ဗန်းမော်မြို့အနီး မြို့မြောက်ဘက် ဧရာဝတီမြစ်နှင့် တာပိန်မြစ်တို့ ပေါင်းဆုံရာတွင် ရှိပြီး စမ္ပါနဂိုရ်မြို့ဟောင်း တည်ရှိရာလည်း ဖြစ်သော ရွှေကျီးနား ကျေးရွာတွင် စစ်ဘေး တိမ်းရှောင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင် ရွှေကျီးနားကျေးရွာ၏ အာရှလူငယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ရွှေကျီးနား ကျေးရွာ၌ အခမဲ့စာသင်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့ရာ အစိုးရထုတ် ဖတ်စာအုပ်များ မရှိသည့်အတွက် မူလတန်း ဖတ်စာများကို ကိုယ်တိုင်ရေးသား သင်ကြားခဲ့သည်။ ဗန်းမော်မြို့နယ် အာရှလူငယ်အစည်းအရုံး၌ လက်ရေးစာစောင် အယ်ဒီတာအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည့်အပြင် ကျေးရွာအာရှလူငယ်အသင်းအတွက် သီချင်းများလည်း ရေးစပ်ခဲ့သေးသည်။
၁၉၇၄ - ၁၉၇၆ ဗန်းမော်မြို့၏ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ၏ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးခြယ်ခံရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဦးနေဝင်းက ပါတီသန့်စင်ရေးတွင် ထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုကြီးတွင် ဦးဆောင်သူအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့် အနိုင်ရရှိသည်။
ပထမအကြိမ် ၂၁ မေ ၁၉၉၆ မှ ၃၁ မေ ၁၉၉၆ ထိ
ဒုတိယအကြိမ် ၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၇ မှ ၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၇ (ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုကာလ)
အတွင်းရေးမှူး၊ ဗန်းမော် ကျောင်းဆရာများ အစည်းအရုံး
ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဗန်းမော် လမ်းစဉ်လူငယ်
အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်၊ ဗန်းမော် အလုပ်သမား သမဂ္ဂ
ကျောင်းအုပ်၊ ဗန်းမော် လူငယ်ရေးရာ ညကျောင်း
မြန်မာစာကထိက၊ ဗန်းမော် စာပေးစာယူတက္ကသိုလ်
အတွင်းရေးမှူး၊ မြို့နယ်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကာလအတွင်း)
အသက်ကြီးပြင်းချိန်တွင် Occular Type of Myasthenia Gravis ရောဂါကို ခံစားနေခဲ့ရသည်။ ယင်းရောဂါကြောင့် မျက်ခွံအနည်းငယ်တွဲကျသည်မှ အပ သွေးတိုးရောဂါ ဆီးချိုရောဂါများ မရှိပဲ အလွန်ကျန်းမာခဲ့သည်။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အသက် (၈၅) နှစ်တွင် စစ်အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရသည့် စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့် ပြန်လွတ်လာချိန်တွင် Insomnia အိပ်မပျော်သည့် ရောဂါ စွဲကပ်ခဲ့သည်။
ဒုတိယအကြိမ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက် အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး ကိတ္တိမ သားသမီး လင်မယားနှင့်အတူ နေထိုင်ရင်း တစ်ညတွင် အိပ်ချင်မူးထူးနှင့် သူအိပ်စက်ရာ ကုတင်တိုင်နှင့် ဦးခေါင်းထိခိုက်မိပြီးနောက် ဦးနှောက်တွင်း သွေးယိုစီးသော ရောဂါ (Epidural Haemorrhage) ခံစားခဲ့ရပြီး မန္တလေးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဦးနှောက်ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူခဲ့ရသည်။ မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံ အထူးကြပ်မတ်လူနာဆောင် (Intensive Care Unit) နှင့် ဦးနှောက်အာရုံကြောလူနာဆောင် (Neuromedical Unit) တို့တွင် တစ်လနီးပါး ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသခဲ့ရသည်။
↑ ဗန်းမော်ညိုနွဲ့ ၁၁ နှစ်မြောက် ကဗျာများ DVB ၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
↑ အရုဏ်ဦး ကလေးကဗျာများ - ဗန်းမော်ညိုနွဲ့ (စာညွှန်း) မြန်မာ့ဂဇက် ၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆
↑ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းသို့ ခရီးတစ်ခေါက် (၂) မြန်မာတိုင်းမ် ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈
↑ ခင်ဝင့်နွယ် (၂၀၁၈) မြန်မာကဗျာများမှ ခေတ်ကာလစံသွေမှု J. Myanmar. Acad. Arts Sci. Vol. XVI. No. 6A
↑ မခင်ဘဲလျက် ကြင်ဟန်စွက်၍ 7Day News ၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၅
↑ နှင်းဝါဝါလွင် (၂၀၁၆) ဗန်းမော်ညိုနွဲ့ စာစုစာရင်း စာကြည့်တိုက်နှင့် သုတပညာဌာန၊ ရန်ကုန်
↑ ခင်ကျော်ဟန် (၂၀၀၆)၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှတ်တမ်း၊ ပြန်ကြားရေးကော်မီတီ၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ၊ စာမျက်နှာ ၁၀၀-၁၀၁
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗန်းမော်ညိုနွဲ့&oldid=643885" မှ ရယူရန်
၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။